Taratasim-pifandraisan’ny mpandika: Mpiteny teratany, mpandikateny sy zavatra maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jolay 2019 7:18 GMT
Mirary Alatsinainy finaritra ry GV'ers!
Arahaba ary tongasoa ato anatin'ny taratasim-pifandraisana farany ho an'ny mpandika… ho an'ny taona 2015! Manantena aho fa samy nahafinaritra daholo ny fialantsasatrareo ary vonona ianareo ny hipetraka hianatra zavatra misimisy kokoa momba ny …
Pikantsary nalaina avy tao amin'ny blogs.transparent.com
Amin'ny maha-mpiteny teratany anareo, efa mba nisy ve fotoana nanontanian'ny olona anareo ny antony maha-marina ny fehezanteny iray nefa tsy hainareo ny nanazava azy? Fa dia fantatrareo fotsiny! Miditra lalina anatin'io lohahevitra io ny Transparent Language ao anaty lahatsoratra iray am-bilaogy mitondra ny lohateny hoe “Ampianaro aho! Moa tsy mpiteny teratany va anao?” (amin'ny fiteny anglisy) mba hiresahana momba ny antony mahatonga ireo mpiteny teratany ho tsy ny mpampianatra lafatra indrindra amin'ny fiteny iray, eny fa na toa mahay tsara ilay izy aza ry zareo. Topazo maso ka lazao anay izay hevitrao momba izany!
Mpandikateny ho an'ireo mpialokaloka
Pikantsary nalaina tao amin'ny www.opensocietfoundations.org
Ao anatin'ireny fotoana tena manahirana mifamatotra amin'ny olan'ireo Siriàna mpialokaloka ireny, iray amin'ireo tolotra tena manandanja indrindra afaka omena ireo olona mandositra ny ady sy ireo loza ny mahita endrika mahazatra na mandre fiteny iray mahazatra. Tanaty lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “Manao izay hahazoana antoka fa tsy misy na iray aza ho very ao anaty fandikàna” (amin'ny fiteny anglisy), resahan'ny Open Society Foundations ny momba ireo tolotra fandikana teny tohanan-dry zareo ary zarainy ireo fitantaràna avy amin'ireo mpialokaloka sy mpandikateny.
Loza mitatao ho an'ny fiteny ve ny aterineto?
Pikantsary nalaina tao amin'ny bigthink.com
“Araka ny fandalinana iray vao haingana nataon'i András Kornai, matematisiànina sady mpahay momba ny teny, latsaky ny 5 isanjato amin'ny fiteny erantany no hikisaka mankany amin'ny endrika nomerika ary mandray anjara amin'ny fanjavonan'ireo 95% ambiny hafa ny aterineto.”
Toa mampahatahotra, sa tsy izany? Hazavain'ny Big Think ny fomba ilàn'ireo fiteny mahavita mivelona anaty nomerika mba hahafahany ho velona mandritra ireo taona maro hoavy, saingy marobe amin'izy ireny no efa maty sahady. Dia inona no hitranga avy eo? Potsiro eto hahalalàna misimisy kokoa!
Ny fomba ibaikoan'ny fiteny ny fihetsehampo?
Pikantsary nalaina tao amin'ny www.theatlantic.com
Ao anatin'ity antsafa niarahana tamin'i Tiffany Watt Smith, mpahay tantara ara-kolontsaina, mpanoratra ny boky “Ny Bokin'ny Fihetsehampon'Olombelona”, resahan'ny Atlantic ny fiantraikan'ny fiteny amin'ireo zavatra tsapantsika ary apetrany ny fanontaniana hoe, “Tsy dia mahery loatra ve ny fahatsapanao zavatra raha tsy manana teny ho entina manambara izany ianao? Vakio lavidavitra kokoa mba hahafantaranao azy!
Mirary ho anareo rehetra Taona iray vaovao mahafinaritra & manatena ny hanohy ny asantsika miaraka amin'ny taona 2016!